हरिप्रसाद सिलवाल Total Record 16
‘ऐना सिसाको, बोलाउँदा बोल्दिनौ किन रिसाको’ यो नेपाली लोकगीत हो । यस्तै लोकले हेर्ने भएर नै होला ऐना लोकगीत भन्दा प्यारो मानिन्छ । ऐना कहाँ र कससँग छैन । साँच्चै भनौं भने यस जमानामा ऐना नभएको व्यक्ति ने हुँदैन । ऐनाप्रतिको मानवीय मोह ताजुकलाग्दो छ । घर कोठामात्र नभएर आफ्नो हरेक सामानमा स–सम्मान एउटा ऐना किन मौज्दात राखिन्छ । खान नपाउनेहरूले पनि ऐना राखेकै हुन्छन् । हेरेकै हुन्छन्, किन ? ऐनामा डिग्री गर्नेहरूको लागि यो महŒवपूर्ण अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ । ऐनाको स्वार्थका लागि कसैले पनि रुपियाँ खर्च गरेर ऐना राख्दैन । ऐना त निजी अनुहार नियाल्न आफ्नो स्वार्थका लागि जगेडा गरिन्छ । जमाना जानी नसक्नु भएकाले व्यक्ति र वस्तुपिच्छेका ऐनाहरू देखापर्नु वा हेर्न पाउनु सामान्य गर्वको कुरा होइन । यसको आकार–प्रकारमा कुनै इन्जिनियरले पनि टाउको नदुखाई विविधीकरण भएको सामान्य बौद्धिक वर्गले पनि ठोकुवा गर्न सक्छ ।
जहाँ पनि ऐना, जस्तो नि ऐना सर्वसुलभ पुर्पुरामा कुँदिएर आएको यस शताब्दीको देन र विश्वको उपलब्धिमूलक चुनौती हो । उहिले महिला वा पुरुषले पटुका वा फिपीमा कैद गर्ने शिशाको ऐना आज चर्पी र बाथरुममा सजिसजाउ । साइकल, रिक्सा, ट्याम्पो, मोटरसाइकल, मोटर रेल, जहाज, दराज, टी–टेबुल, पसल सर्वत्र जमानाले जन्माएको लोकप्रिय ऐना, कसको साथमा छैन ? आफूले आफैंलाई वा अरुलाई नियाल्ने मोहक ऐना सर्वत्र छ कि छैन ? जिनी चोथालो, मालिक वा गोठालो हु–बहु दर्पणमा छाया उत्रिए वा देखिए पछि सहज तवरले स–सम्मान सक्कलको रूपमा स्वीकार्नु सचेत मानवको कर्तव्य हो । त्यसैले भन्ने गरिन्छ ऐनाको फैसला र प्रधान न्यायाधीशको फैसला विवादरहित अर्थात् अकाट्य मानिन्छ । विशुद्ध न्यायालयलाई विवादमा मुछेर अन्मरियो भनेर धारे हात पार्दै सराप्नुहोला । म बबुराले त ऐनाकै व्यापार गर्ने भएकाले न्यायधीशहरूले पनि साधारण जनताले झैं ऐना किनेर थुतुनु हेरून् भन्नाखातिर विवादरहित विज्ञापनमात्र गरेको ।
ऐना वैज्ञानिक बुद्धिले प्रयोग गरेर तयार पारिएको शुद्ध भौतिक साधन हो । यसमा उत्रिएका छायाँहरू शतप्रतिशत यथार्थ र तथ्यपरक हुन्छन् । नपत्याए उउटा ऐना किनेर हेर्नुस् त । तर न्यायाधीशको फैसला सत्यतथ्य, यथार्थ र स्वच्छ हुनसक्दैन । सत्यतथ्य वा निष्पक्षताको सीमाभित्र बुर्कुसी मार्न नसक्नु न्यायाधीशको वाध्यता हो । निचोरे... के आउँछ, काटे रगत आउँछ, के गर्नु बाँच र बचाऊ, भन्ने त राष्ट्रिय नारा नै हो नि । सीमित आय असीमित आवश्यकताको सामुन्ने यस जमानामा बाहुनले पनि भोको पेटले वेद पढ्दैन । भोगविलासमा जीवनको अन्त्य गर्न अनधिकृत धन, ऐशआराममा गौण हुन्छ । लोभलालचले ग्रस्त न्यायाधीशबाट ऐनालेझैं यथार्थ निष्पक्ष तथा सत्य फैसलाको आशा राख्नु स्वयंमा लज्जास्पद हुन्छ । ऐना प्राणरहित निर्णायक हो । स्वार्थरहित निर्णय विवादरहित हुन्छ । जीवित स्वार्थी न्यायाधीशहरू पारिवारिक नौका डोलाउन आछु–आछु परेर नै होला झगडियाको झुपडीमा निसङ्कोच मैलो लुगा धुन रुचाउँछन् । अन्ततः मैला छिटाहरू मुखमा पोतिएको पत्तै नपाई घूसको वूजोका साथ फैसलाको अन्त्य गर्नुमा आनन्द मान्छन् । यसलाई कानुनविद् विखे गुण भनी जान्नुपर्छ । र त भन्नै पर्ने हुन्छ– न्यायाधीशको फैसला ऐनाजस्तो सफा, स्वच्छ, तथ्यपरक र निर्भीक हुँदैन । फलस्वरूप रुनु पर्ने हाँसिराखेका हुन्छन् भने हाँस्नु पर्ने रोइराखेका कारुणिक दुर्घटना देख्न र सुन्न पाइनुृ स्वच्छ, न्यायमूर्तिको फुर्तीमा डढेलो लाग्नु हो । यस्तो तमासा कसैलाई पच्ने र कसैलाई नपच्ने मानवीय वंशाणुगत लक्षण हो । दर्दनाक अवस्थामा न्यायाधीशहरू निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक गन्तव्यको अन्तिम तारो बन्न सक्दैन । यो त सोझा निमुखाको सा¥होगा¥हो फुकाउने एउटा भरपर्दो बाहनामात्रै ।
‘खोला धाउँछ कि तिर्खा धाउँछ’ भनेझैं ऐनाले पनि नक्कले दोपायालाई खोज्दै हिँड्दैन । बरु मान्छे नै नानाभाँतीका ऐनाहरू खोज्दै बजार पसेको दुनियाँले देखेका छन् । बोक्ने साक्षी छन्, देख्ने साक्षी छन् । ऐनाको भर मान्छे, मान्छेको भर ऐनाबाहेक दुनियाँमा केही छैन । ऐनाको निष्पक्ष एवं पारदर्शितामा रूपसी हुन् या कुरूप, सशक्त हुन् या अशक्त आजित छन् । ऐनाअगाडि गरीब उभियोस् वा धनी, अनपढ स्वाँठ उभियोस् वा विद्वान् च्वाँक, लिंगीय भेदभावरहित ऐना कुन पार्टीसँग छैन ? सिन्दुर टीका धारण गर्ने श्रीमतीसँग ऐना, दा¥ही जु“गा मठार्ने, पाखुरा बटार्ने श्रीमानसँग ऐना । साइकल, मोटरसाइकल, टेम्पो वा रिक्सा या स्कुटरको दायाँबायाँ ऐना । जहाजमा ऐना, मोटरमा ऐना, जनताको कार वा घरमा ऐना । गर्दाभन्दा प्राडो, पजेरोजस्ता सुरक्षित मन्त्री, सांसदहरूझैं शक्तिशालीले सयर गर्ने जीपको अगाडि–पछाडि ऐना, जुन चीजले न्यायाधीशहरूले झैं आको, गाको वा छिसिक्क के भाको सम्पूर्ण पूर्वाग्रहरहित, यथार्थसहित पारदर्शी तवरले तत्काल देखाउँछ । न्यायाधीशहरूले झैं गोजी नभरिएसम्म निर्णय दिन गाह्रो मान्दैन । त्यसैले कानुनविद्हरू हो, एउटा दर्पणमा पैसा समर्पण गरौं र ऐना हेरौं । यो ज्यादै लोकप्रिय तथा सङ्ग्रहणीय प्रमाणित भए तापनि हामी (खप्पर) फुटे, ऐना हेर्छौं तर ऐना फुटे हामी फालिदिन्छौं । हेर्दैनौं । यसलाई मानवीय स्वार्थको पराकाष्ठा मानिन्छ ।
ऐना नहेरी शृङ्गार (मेकअप) गर्दा मखुण्डी बन्न सकिन्छ । त्यसैले ऐना अनिवार्य मानिन्छ । ऐना नहेरी कपालको सिउँदो कोर्न मिल्दैन । जबर्जस्ती कोरे सोझो सिउँदो नागबेली बन्नसक्छ । ऐना नहेरी गाडी हाँक्नाले औ“सी पूर्णिमामा विरलैले जिभ्रो टोक्ने गरेका छन् । ऐनाले सम्भावित दुर्घटनाबाट मुक्ति दिने जुक्तिदेखि न्यायाधीशहरू छक्क पर्न सक्छन् । यो वैज्ञानिक रहस्यको गर्भमा छ तर न्यायाधीशको शंकास्पद फैसला वैज्ञानिक रहस्यको गर्भमा ओथारिन सक्दैन । जुन हाम्रै देश र समाजमा निसङ्कोच एवं लज्जास्पदावस्थामा जीवित छ । जसको सनाखत गर्नु हाम्रो धर्म ठहरिन्छ ।
जुनसुकै धरातलमा होस् ऐनाले साँचो बक्छ, सही देखाउँछ । यसको निर्णयलाई डाहा गर्नु बत्तीले सूर्यलाई ईष्र्या गर्नुजस्तो हो । ज्यान जाओस् तर ऐनाले बाहिरहोस् या भित्र गलत चित्र दि“दैन । विश्वमा भएका हुन् वा गएका न्यायाधीशहरूको छलकपट नैतिक पतन र व्यक्तित्व ¥हासका कारण सायद सुधारार्थ धेरैले सिंगै चोर औंलो ठड्याएर तीतो चेतावनी दिइराखेका छन् जसलाई फैलाको रङ्गमञ्चमा शुभसङ्केत मान्न गा¥है पर्ला ।
‘ऋषिमुनिका सन्तान शिसीमुनि’बाट
‘क’ को कुरौटे कुरा
ह्यापी व्रत !
कुरावादको जय !
महान परिवर्तन : नामपरिवर्तन
भूतको भिनाजुको ‘भीमसेनपाती’
हाकिमको खप्पर : विसङ्गतिलाई ठक्कर